Iindaba ze-3 Supergeo - Geofumed
NgoJulayi, 2013 ezintsha, SuperGIS
Ukusuka kubadali bemodeli yeSuperGIS sifumana iindaba ezifanele ukuhlangula.
I-Fujairah yeMisebenzi yoLuntu kunye namaSebe oLimo aphucula ukugcinwa kweziseko zophuhliso kunye neSuperGIS
UFujairah ngomnye we-United Arab Emirates, kwi-Mbindi Mpuma. Benze isigqibo sokusebenzisa itekhnoloji ye-SuperGIS yokulawula umjikelo wobomi bezibonelelo, kubandakanya nolawulo lwee-asethi, ucwangciso lwenkqubo kunye nokusebenzisana kwedatha phakathi kwabasebenzisi.
Kuyathakazelisa ukuba itekhnoloji yeCAD / GIS ingena njani kulawulo lwemisebenzi yoluntu ngaphaya kolawulo lwedatha, ekusebenzeni. Kwaye kukuba imisebenzi yoluntu inyathelo elisisiseko nelibalulekileyo kuphuhliso loqoqosho lwelizwe; qhagamshela isenzo sethu nendalo.
Kolunye uhambo lwam olulandelayo ndinethemba lokujonga oku, kuba ndingacinga ukuba kwimeko ye-900 AssetWise iphantse ilungele loo nto, kodwa ukwenza ngezixhobo isixhobo uninzi lwethu ebesisoloko sihambisana nemephu ... ngaphezulu kunomdla. Bayakwenza oko nge-SuperGIS Desktop 3.1 yokuhambisa idatha, kunye neBusolini kunye neCONSTANTINI PROGETTI e-Itali eyaphunyezwa kukuphumeza iSuperSurv yokulawulwa kokukhanya kwesitalato.
Ngapha koko, kuyaphawuleka ukuba le yinto yokwenziwa kwezinto ezinokubonwa kumboniso odibeneyo phakathi kweSuperGeo kunye neeGeoSystems kwiForizoli yeForum yaseMbindi Mpuma. Umba onomdla apho bobabini umenzi kunye nomthengisi weenkonzo benza khona isibonelelo sobabini.
I-SuperSurv 3.1 SuperPad 3.1atan Google Iimephu / I-OpenStreetMaps njengemephu yangemva
Sebenzisa izixhobo zeMephu ye-Intanethi, ezi zixhobo zibini zivumela imephu yangasemva ukuba ibe yimephu ye-intanethi, njengobume beMephu zikaGoogle okanye i-OSM.
Ke ngoko, ukuba sibonisa imephu yemveliso yethu nge-SuperGIS server 3.1, kuyenzeka ukuba uyibeke ngasemva xa kufakwa okanye kuhlaziywa idatha ye-cartographic okanye ye-topographic efana neSuperSurv.
Olunye ulwazi malunga ne-SuperSurv 3.1, http://www.supergeotek.com/LandingPage_SS3.1.aspx
Unokukhuphela kwakhona inguqulo yamahhala kwi http://www.supergeotek.com/download6mobile.aspx
I-SuperPad 3.1 iya kukhutshwa kwikota yesithathu ye-201.
Ushicilelo olulandelayo lwe-SuperGIS luya kubandakanya ulwimi lweSpanish
Owona mceli mngeni uthandekayo wale software kukufikelela kwimeko yokuthetha iSpanish. Ngenxa yoku, sonwabile ukunika ingxelo yokuba baye babandakanya iSpanish kuhlobo lwabo olulandelayo, ke siqinisekile ukuba abasebenzisi abaninzi kunye neenkampani ziya kuvuma ukufaka isoftware enokwazi ukukhuphisana kwihlabathi liphela. Nangona wazalelwa eTaiwan, uzimisele ukutyala imali kulwimi lwethu; Yintoni efanele ihlonelwe.
Apha ungabona ividiyo edeleyo yokuba isebenza kanjani:
Post edlulileyo«Edlulileyo I-Vbookz, umdlali obalaseleyo we-iPad / iPhone / iPod
Post Next Ngaba ndingasebenzisa imifanekiso yeGoogle Earth ye-cadastre?Okulandelayo "